Ismaamullada bariga dalka oo ballanqaaday in ay ansaxin doonaan BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Ismaamullada bariga dalka oo ballanqaaday in ay ansaxin doonaan BBI
Ismaamullada bariga dalka oo ballanqaaday in ay ansaxin doonaan BBI
Wakiillada golayaasha hoose ee ismaamullada Kitui, Machakos iyo Makueni ayaa ballanqaaday in ay si aqlabiyad leh u meel marin doonaan hindisaha sharci beddelka ee BBI.
Arrinkan ayay shaaca kaga qaadeen shir ay ku yeesheen dowlad deegaanka Machakos.
Sidoo kale waxay hoosta ka xarriiqeen in ka dib marka ay hindisaha BBI ay u codeyaan ay qaban doonaan shirar dadweynaha lagu fahansiinayo faa’iidooyinka ay ka dhaxlayaan qorshahan.
Tani ayaa imaanaysa iyada oo ilaa iyo hadda hindise sharciyeedka BBI laga ansaxiyay 11 ismaamul sida Nairobi, Vihiga, Laikipia, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Busia, West Pokot, Trans Nzoia, Kajiado iyo Kisii.
Waxaa ilaa iyo hadda laga diiday oo keliya ismaamulka Baringo ee gobolka Rift Valley.
Previous articleDHAGEYSO:Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay hadal ka soo yeeray Imaaraatka Carabta
Next articleRaila: Ma jirto cid NASA ka tirsan oo aan taageeri doono